Inkonzo-I-Shenzhen Morc Controls Co, Ltd.
Iinkonzo ze-MORC ukusuka ekuncediseni ekukhetheni imveliso kuwo onke amabakala omjikelo wobomi bemveliso yethu. Kubandakanya ukusombulula ingxaki kunye nenkonzo ebanzi yeeprojekthi zonke. Iimveliso zethu ziyilelwe ukusebenza ngokuthembekileyo kwiimeko ezininzi zeshishini. Silwela ukubonelela ngeenkonzo abathengi bethu abazifunayo ukuze baqiniseke ukuba izityalo zihamba kakuhle ngaphandle kokuphazamiseka.
Ukuphuculwa kunye nokutshintshwa kwemveliso esele ikho kunokuba yeendleko-ezisebenzisekayo kwimveliso yento yokuqala. Ngeenkonzo zethu ezibanzi, sinceda abathengi bethu ukuba benze ufakelo lwanamhlanje lube nokufakelwa kunye nokutshintsha iimveliso ezindala / ezingasasebenziyo ukunciphisa indleko kubathengi.
Ukuqinisekiswa komgangatho we-MORC
Umgangatho sisiseko sethu kubukho bexesha elide kunye nempumelelo yenkampani yethu. Umgangatho weemveliso zethu sisitshixo sokuphumeza ukwaneliseka kwabathengi. Ngokumamela feedbacks evela kubathengi bethu, siyakwazi ukuhlala sifunda kwaye siphucula inkonzo yethu kunye nemveliso. Izixhobo zethu zovavanyo olupheleleyo, kunye nolawulo lomjikelo wobomi beemveliso zethu buqinisekisa umgangatho wezinto ezibonakalayo ezivela kubaxhasi bethu, iimveliso zethu ziyahlangabezana neemfuno ezivela kwindawo enqabileyo yezemveliso.
Umgangatho ikwathetha ukuba bonke abasebenzi e-MORC bazithatha njengoxanduva lomgangatho weemveliso kunye nenkonzo yethu. Ngenkqubo eqhubekayo yokuphucula
siqinisekile ukuba kuphela ngabathengi abonelisekileyoyo abanokwenza ishishini nathi kwakhona.
Uxanduva lwe-MORC kwintlalontle
Impilo nokhuseleko lwabasebenzi be-MORC lubaluleke kakhulu, sinika indawo yokusebenza ekhuselekileyo kunye nendawo elungileyo yokonwaba. Sikubona kubalulekile ukuba negalelo kwaye sizibandakanye ngokuthembekileyo kwiindawo zasekuhlaleni nasekuhlaleni
I-MORC izimisele ngokupheleleyo ukunciphisa ifuthe layo kwindalo ngokuthintela ungcoliseko, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla, amanzi kunye nenkunkuma kunye nokurisayikilisha.